यस्तो छ ओली-दाहाल सम्बन्ध : विगतदेखि हालसम्म – Setosurya
यस्तो छ ओली-दाहाल सम्बन्ध : विगतदेखि हालसम्म
काठमाडौं : कम्युनिस्ट दर्शन एकै भए पनि ५५ वर्षदेखि स्कुलिङ फरक भएका मूलधारका प्रभावशाली दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै बनाउन सहमत नेता हुन्- प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
दाहालकै प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री
एमाले अध्यक्ष ओली दुवै पटक माओवादी अध्यक्ष दाहालकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। पहिलोपटक दाहाल आफैँले प्रस्ताव गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए र पछि अविश्वास दर्ता गराएर कुर्सीबाट निकाल्न भूमिकासमेत खेले।
ओलीले सरकार छाड्ने बेला यी दुई नेताबीच सबैभन्दा पेचिलो संघर्ष चल्यो। आरोप-प्रत्यारोपमा दुवैले कसर बाँकी राखेनन्। तर, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनेजस्तै यी दुई पार्टीबीच असोज १७ मा एकाएक चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्मको सहमति बन्यो।
दोस्रो पटक पनि दाहालकै पार्टीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। दाहाल पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पहिलो पटक एमालेसहितको समर्थनमा र दोस्रो पटक कांग्रेसलाई साथ लिएर। दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओली पार्टीको मूल नेतृत्वमा थिएनन् तर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीसँगको सम्बन्धमा ब्रेक लागेको थियो।
अब एउटै कमिटीमा
२०४४ सालदेखि ओली पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छन्। दाहाल पनि सोही पेरिफेरिमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुगिसकेका थिए। ओली केन्द्रीय समितिमा पुग्न संघर्ष गर्दैगर्दा दाहाल भने पार्टीको सर्वाेच्च पद सम्हाल्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए।
दाहाल ०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा (मशाल) को महामन्त्री बनिसकेका थिए। त्यसयता उनी निरन्तर पार्टीको माथिल्लो पद (अध्यक्ष) मा छन्। पछिल्लोपटक ०७० मा पार्टीको विराटनगर महाधिवेशनबाट पनि उनी अध्यक्ष चुनिएका थिए। यस हिसाबले २८ वर्षयता दाहाल पार्टीको सर्वाेच्च पद (अध्यक्ष) मा छन्। ओली भने ०७१ को एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका हुन्। उनले पार्टी नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको छ।
यी दुई नेताबीच एकै कमिटीमा बसेर सहकार्य भएको छैन। फरक स्कुलिङबाट भएका कारण पनि दुई नेताले एकै कमिटीमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएनन्। तर, अब यी दुई नेता एकीकृत पार्टीको एउटै कमिटीमा बसेर काम गर्दै छन्।
एकीकृत पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को संयुक्त नेतृत्व गर्ने गरी ओली-दाहालले सहकार्य गर्दै छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने यी दुई नेताको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण अवस्थामै बितेको थियो। दाहाल ओलीलाई मानसिक उपचार गराउनुपर्नेसम्मका चर्का अभिव्यक्ति दिन्थे भने ओली पनि माओवादीलाई हिंस्रक (जंगली) सम्मका आरोप लगाउँथे। तर, अहिले यी दुई नेतामा आएको मिलापले कम्युनिस्ट आन्दोलनमै ‘ब्रेक थु्र’ गराएको छ।
निर्वाचनदेखि मतगणनासम्म राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको एमालेको आरोप
सभापति देउवाले भने-काँग्रेस भंग गरिदिए हुन्छ, पौडेल समूहको आयो यस्तो प्रतिक्रिया
गायिका कोमल ओली एमालेमा प्रवेश गर्दै
चितवनमा एमालेलाई अर्काे सफलता
भरतपुर महानगरमा मतगणनाको माग गर्दै एमालेद्वारा संसद् अवरुद्ध
डा. केसीसँगकाे सम्झाैता भोलिपल्टै तोड्ने प्रयास
नयाँ सरकार नै गठन गर्न नदिने गरि कसले खेल्यो खेल ? यस्तो छ संवैधानिक अड्चन !